Uchishandisa Mafomu eWordPress uye Gravity Kubata Zvinotungamira | Martech Zone
Uchishandisa Mafomu eWordPress uye Gravity Kubata Zvinotungamira
Mugovera, October 24, 2020 Mugovera, October 24, 2020 Douglas Karr
Kushandisa WordPress sezvo yako yemukati manejimendi sisitimu iri kunyanya kuita mazuva ano. Mazhinji emasaiti aya akanaka asi anoshaya chero zano rekutora inbound kushambadzira inotungamira. Makambani anoburitsa mapepa machena, nyaya dzenyaya, uye mashandisiro emakesi zvakadzama pasina kumbobvira vatora ruzivo rwekuonana rwevanhu vanozvitora.
Kugadzira webhusaiti nekutora uko kunogona kuwanikwa kuburikidza nemafomu ekunyoresa inzira yakanaka yekutengesa. Nekutora ruzivo rwekuonana kana pamwe kunyangwe kusarudza kupinda mukati kwekuenderera mberi kweemail kutaurirana - urikurega mushandisi azive kuti vangangobatika kudzoka kuti vadzokere ruzivo rwavo rwekufonera.
Kana iwe usingashandise WordPress, uchida kushandisa mafomati pane akawanda mapuratifomu kana nzvimbo, kana uine zvido zvemberi, kurudziro yangu inogara iri formstack. Zviri nyore kushandisa, kumisikidza, uye kuisa mukati zvisinei nesaiti yako. Kana iwe uri kushandisa WordPress, giravhiti Forms yagadzira plugin inozivikanwa kwazvo inoshanda nemazvo kutora data.
Giravhiti Mafomu chinhu chinoshamisa chekudhonza uye kudonhedza fomu plugin yakanyatsogadzirirwa WordPress. Yakagadzirwa zvakanaka, ine toni yekuwedzera-ons uye kusanganisa, uye - zvakanakisa zvese - inochengetedza kuendesa kwese mukati meWordPress. Mazhinji emamwe mafomu ekushandisa kunze uko anongopusha iyo data kune email kero kana yekunze saiti. Kana paine nyaya nekupfuura kweiyo data, iwe hauna chero rudzi rwe backup.
Simba Giravhiti Zvinosanganisira
Nyore Kushandisa, Simba Mafomu - Kurumidza kuvaka uye kugadzira ako mafomu eWordPress uchishandisa inonzwisisika fomu yekuona mupepeti. Sarudza minda yako, gadzirisa zvaunogona, uye nyore kupinza mafomu pane yako WordPress saiti inowaniswa uchishandisa zvishandiso zvakavakirwa-mukati.
30+ Yakagadzirira Kushandisa Fomu Minda - Mafirivhi eGiravhiti anounza akasiyana mafomati epamunda pamaoko ako uye uvimbe nesu, zvigunwe zvako zvichakutenda. Sarudza uye sarudza kuti ndeapi masimi aunoda kushandisa uchishandisa iri nyore kushandisa fomu mupepeti.
Mamiriro ezvinhu Logic - Yakagadziriswa Logic inokutendera iwe kugadzirisa yako fomu kuratidza kana kuviga minda, zvikamu, mapeji, kana kunyangwe bhatani rekutumira zvinoenderana nesarudzo dzemushandisi. Izvi zvinokutendera iwe kudzora zviri nyore ruzivo rweupi mushandisi waunokumbirwa kuti upe pane yako WordPress inogadzirirwa saiti uye gadziridza iyo fomu zvakananga kune zvavanoda.
Email Notifications - Kuedza kuramba uri pamusoro pezvose zvinotungamira zvinogadzirwa kubva kune yako saiti? Giravhiti Mafomu ane email auto-vanopindura kuti vakuchengete iwe mukuziva nguva dzese fomu raunotumirwa.
Faira Zvikwereti - Unoda kuti vashandisi vako vaendese magwaro? Mifananidzo? Zviri nyore. Ingo wedzera faira kurodha minda kune yako fomu uye chengeta mafaera kuseva yako.
Sevha uye Enderera - Saka wagadzira fomu yakajeka uye zvinogona kutora chinguva kuti upedze. Nemafomu eGravity, unogona kubvumira vashandisi vako kusevha fomu rakapedziswa zvishoma uye vodzoka gare gare kuti varipedze.
Masvomhu - Giravhiti Fomu haisi yako yemazuva ese fomu plugin… iri masvomhu wiz zvakare. Ita zvemberi kuverenga zvichibva pane yakatumirwa munda kukosha uye kushamisika shamwari dzako.
Kubatanidzwa -Mailchimp, PayPal, Stripe, Highrise, Freshbooks, Dropbox, Zapier uye zvimwe zvakawanda! Batanidza mafomu ako neakasiyana siyana masevhisi uye maapplication.
giravhiti Forms inofanirwa kune yega yega saiti saiti. Isu tese tiri vaviri takabatana uye tine rezinesi rekuvandudza hupenyu!
Dhawunirodha Mafomu eGiravhiti
Tags: kutora zvinotungamiranezvimiromafomu egiravhitiinbound MarketingBairiraWordPressmafomu emazwiWordpress plugin
Kugadzira Iyo Dhijitari Roadmap YePamberi-Ekutarisa Mabhizinesi
Gadzira Online Dhairekitori reWordPress neGravityView
Gumiguru 11, 2009 na5: 19 PM
Vhidhiyo inobatsira kwazvo, Douglas. Chengeta zvinhu izvozvo zvichiuya.
Gumiguru 26, 2009 na7: 46 PM
Nice tut, yakapusa uye yakabatsira uyu GravityForms newbie kuwana fomu rangu rekutanga kumusoro uye kumhanya. http://bit.ly/4ANvzN
Iwe unofarira iyo intensedebate? Zvinoita sekunge zvinowedzera "nyonganiso" (kureva mamwe mabhatani) kune vamwe vaverengi… uye zvakaoma zvakakwana kuti uwane mhinduro w/o!
Aug 22, 2011 na7:24 PM
Gravity Mafomu uye WordPress musanganiswa wakanaka. Iwe une chero mazano ekuviga iyo chaiyo URL kudhawunirodha faira uye nekupa yakasiyana yekurodha URL inogona kushandiswa kamwe chete? Chinhu chakadai se bit.ly chinogona kushandiswa kugadzira imwe-nguva yekurodha link? Ndiri kufunga zvekushandisa pakudhawunirodha nziyo dzakatengwa kana mamwe mafaera aunoda zvishoma dziviriro paari?
Aug 22, 2011 na7:51 PM
Ini handisi kuvanza iyo chaiyo URL - ndinoisa chinongedzo mune email yekupindura saka zvinoda kuti vave nekero yeemail inoshanda. Ndine chokwadi chekuti, neimwe kodhi diki, unogona kuvapa chinongedzo chine hashi inova kero yeemail yakavharidzirwa - zvino kana vakaidzvanya, waigona kuona kana yakatodhawunirodha kamwe chete uye kumisa chero ani zvake kuti aidhawunirodhe.
Aug 22, 2011 na8:10 PM
Kuramba wakatarira kuti iri kudhawunirodhwa uye kubvisa kana kushandura chinongedzo hazvingaite. Kukwanisa kushandisa URL yekupfupisa rudzi rwechishandiso kukurumidza kugadzira uye obfuscated link uye kugovera nemushandisi iyo yaizoshanda yakafanotsanangurwa nhamba yenguva ingave yakanaka yekuwedzera.
Aug 22, 2011 na8:37 PM
Wataura zvandabva kuita. Ndiyo 'neimwe diki kodhi' chikamu.
Apr 30, 2013 pa 7: 14 AM
wedzera faira maneja uye gadzira nyore kurodha nzvimbo - hapasisina url's
May 10, 2015 pa 12: 13 AM
Hapana anoshandisa mafomu egiravhiti + mail chimp yekubatanidza ine drip-like popup / popover bhokisi kutora email kero dzetsamba? Ndakaona kuti saiti ino inoshandisa drip uye yaitsvaga nzira yekuve nekadhipi-sekutaridzika pasina muripo.
May 11, 2015 pa 3: 48 PM
Isu tinoshandisa Gravity Mafomu uye takaita Mailchimp asi hatina kuona zvauri kutsvaga. Ndinobvuma - zvingave zvakanaka kungova nechombo chakareruka! OptinMonster haina kunyanya kushata uye inogona kugadzirwa zvakanyanya.